I-alamu yesiphene kunye nesisombululo sephaneli yokulawula i-diesel
Amandla okugcina amandla edizili genset awanakuqala kwaye ayeke ngokuzenzekelayo Uhlalutyo lokungaphumeleli 1.Injini yedizili ivale ukudlulisa akukho senzo. 2.dizili injini solenoid yaphukile. Ukusombulula ingxaki 〈1〉 Linganisa ukucinywa kwenjini ye-Diesel ngeemitha ezininzi, umbane oqhelekileyo osebenzayo ngama-25.5 V, ukuba awudluliswanga ...
Uhlalutyo ukusilela kunye nesisombululo ukuba idizili genset injini zeemoto umsi akuqhelekanga
Ukusebenza okuqhelekileyo kweinjini yedizili enomthwalo, umbala womsi wokukhupha umbala ungwevu oqhelekileyo, xa umthwalo unzima kancinci, kunokuba grey emnyama. Apha kukhupha umbala womsi ngokungaqhelekanga ubhekisa kumsi womsi okanye umsi wokukhupha umhlophe okanye umsi wokukhupha uluhlaza. 1, umsi omnyama ubonise ukutsha ...
Uhlalutyo ukusilela kunye nesisombululo injini iseti generator idizili ayikwazi ukuqala
Kukho izizathu ezahlukeneyo ezingenakuqala kwenjini ye-diesel genset. Ngokukodwa kula manqaku mane alandelayo: Inkqubo yokuqala yokusilela kuhlalutyo A. Qalisa ombane ebhetri asezantsi, owona mthamo awonelanga (ubonakalisa amandla ombane njengombane obonakalayo) B.Qala ikhebula lebhetri kunye nempazamo yokubamba iimoto CS ..
Yintoni unobangela womsi osetiwe ngumvelisi wedizili?
ngomphathi ku 21-04-14
Iiseti ze-Diesel generator zinokukhupha umsi ngexesha lokusebenza. Imibala eyahlukeneyo yomsi ibonisa iimpazamo ezahlukeneyo. Ukuba umsi weseti yomvelisi wedizili awusetyenziswanga kwangexesha, kunokubangela ukusilela kweseti yomvelisi wedizili okanye ukusilela ukuqala. Nazi ezinye zeemeko zokutshaya ...
Amalungiselelo okufakwa kweyunithi
Ukuphathwa kweyuniti ekuphatheni kufuneka kuthathele ingqalelo kwintambo yokuphakamisa kufuneka iboshwe kwindawo efanelekileyo, ijinga kancinci. Xa iyunithi ithuthwa yaya kwindawo ekuyiwa kuyo, kufuneka ibekwe kwindawo yokugcina izinto kangangoko kunokwenzeka. Ukuba akukho ndawo yokugcina izogcinwa ngaphandle, t ...
Inkampani yethu iphumelele isatifikethi semveliso yelungelo lomenzi weseti yokuma okuzolile
ngomphathi ku 16-03-09
Inkampani yethu yafumana ngokusesikweni isitifiketi semodeli yelungelo lomenzi wejeneretha emileyo ethe cwaka emiswe nge-9 ka-Matshi ka-2016.Ijenreyitha emileyo ethe cwaka ilungisa ulwakhiwo lwangaphakathi lwejenreyitha ukuze iyunithi ithathe indawo encinci. Kufanelekile ukuba smal ...
Inkampani yethu inikwe isatifikethi semveliso yelungelo elilodwa lomenzi weseti yedizili eyenzekileyo
ngomphathi ku 15-06-17
Inkampani yethu ifumene ngokusesikweni isiqinisekiso semodeli yelungelo elilodwa lomenzi wedizili ene-ultra-cwaka ebekwe nge-17 kaJuni, 2015. Le genset yedizili ethe cwaka inesakhiwo sangaphakathi kunye noyilo olusebenzisekayo, olulungele abasebenzisi ukuba balungise kwaye banxibe. ..
Isiphoso alarm kunye nesisombululo idizili ge ...